Klas ego maka e-commerce | ECommerce ozi ọma
N'ezie, ego maka azụmahịa kọmputa chọrọ ọwa ndị na-abụghị nke ndị mmadụ. Site na usoro nke ngwaahịa ma ọ bụ akara kredit na-echebara mkpa gị echiche. Ebe otu n’ime ihe kachasị mkpa bụ liquidity ime ihe ndozi ya ma obu nani iji nwayọ nwayọ ma merie asọmpi na mpaghara dijitalụ.
N'ime usoro akwụmụgwọ ndị a, e nwere ngwaahịa ndị akọwapụtara dị ka ịgbakọ ngwaahịa yana obere ịgbazinye ego nwere ike ịbụ n'oge a. Ikpuchi ezigbo akụkụ nke ebumnuche ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị nwere. Site na a ọnụego ọmụrụ nwa nke nwere ike ịbara gị uru karịa ọdịmma gị. Site na ọdịiche dị na pesenti ole na ole nke onyinye nyere ndị ụlọ ọrụ ego na-enye ndị mmadụ n'otu n'otu.
N'aka nke ọzọ, a gaghị echefu ya na ihe ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ a chọrọ dị iche na nke ọdịnala ma ọ bụ nke azụmahịa. Site n'ịchọ mmefu ndị dị iche na ndị a ma ya mere ụlọ ọrụ ego na-eji ọgwụgwọ ọzọ. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị mere anyị ga-eji gosipụta klas ego maka azụmahịa kọmputa site ugbu a. Ha dị ọtụtụ ma dịgasị iche iche, dịka ị ga-ahụ n'isiokwu a.
1 Ofdị ego: ịzụ ahịa
2 Gbazinye na mgbanwe ka ukwuu
3 Mwepu ego na azụmahịa
4 Egwu mkpuchi na arụmọrụ
5 Usoro ego ICO
6 Nweta na usoro ntanetị
Ofdị ego: ịzụ ahịa
Ọ bụ ngwaahịa ahaziri maka ọchụnta ego ọ bụla ma ọ bụ ọkachamara ọ bụla yana, ọkachasị, obere ụlọ ọrụ pere mpe na, yana usoro a, nwere ike rbelata oke oru nke ngalaba nhazi, nyefee ego a na-enweta site na ire ahịa na nchịkọta ya. Nakwa ọganihu na ụbọchị akwụ ụgwọ nke akwụkwọ ọnụahịa ahụ, ihe a niile ga-eme ka uru gị nwee, ikike kredit na ego nke ụlọ ọrụ ahụ.
N'echiche nke Spanish Association nke Ime ihe "Enweghị nkọwapụta akọwapụtara nke ụlọ ọrụ ndị ọrụ nke ngwaahịa a, kama ọ bụ ngwaahịa ahụ rere na ọnọdụ ịkwụ ụgwọ ka enyere njedebe ahụ. Yabụ, niile ụlọ ọrụ nwere ike ịbụ Factoring ọrụ, na-ere na anụ ụlọ ahịa ma ọ bụ mbupụ ”.
Gbazinye na mgbanwe ka ukwuu
Okwu mgbazinye bụ synonymous na ịgbazinye ụlọ ogologo oge, na nke a ụgbọ, ihe ọ bụla ya anam, nlereanya ma ọ bụ nke. Site na ịgbazite, otu ụlọ ọrụ (ụlọ ọrụ na-agbazinye ego) na-azụta ụgbọala ọhụrụ, dịka ụtọ na mkpa nke onye ahịa ya ma ọ bụ onye na-akwụ ụgwọ ya si dị, wee mee ka ọ dịrị ha.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ngwaahịa nwere njikọ chiri anya na ọdịmma nke ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị, ọ nwere ike bụrụ nnukwu enyemaka n'oge ụfọdụ na ndụ ụlọ ọrụ ahụ. Otu n'ime uru ya kachasị dị mkpa bụ eziokwu ahụ bụ na ụdị mmadụ na ndị iwu kwadoro nwere ike ịgbazite ụlọ na-enweghị mmachi ma na-anọchi anya ọrụ zuru oke nke na-ekpuchi akụkụ niile metụtara ojiji nke ihe onwunwe ọ metụtara.
Ọ bụ ụzọ pụrụ iche nke ịkwụ ụgwọ nke nwere ike inyere ọdịmma nke ndị nwe ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị n'oge ụfọdụ ma ọ bụ ọzọ. N'ihi na ọ na-enye nnukwu ọmụrụ nwa asọmpi karịa kredit ndị ọzọ enyere ikike maka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ a pụrụ iche. Na amortization nke ejiri oke mgbanwe ya na nke a na-agbanwe maka mkpa nke ụlọ ọrụ dijitalụ.
Mwepu ego na azụmahịa
Ọ bụ ọrụ na n'ihu ego ịkwụ ụgwọ ego (ego, akwụkwọ ikikere na nnata) na ụgwọ azụmaahịa, n'ịntanetị yana ọghọm dị mma. Nke ahụ bụ, ha na-atụ anya ego ịchọrọ mgbe ha wepụsịrị ọmụrụ nwa maka oge a na mmefu ndị kwekọrọ na ya. Maka oge ahụ, mgbe ntozu okè ruru, ụlọ ọrụ kredit na-ahụ maka njikwa nchịkọta.
Ngwaahịa ọzọ dị maka ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị bụ ihe a na-akpọ ụgwọ nnata. Ebee ma ọ bụrụ na nchịkọta nnata bụ ọrụ mgbe niile na azụmaahịa gị, ụlọ ọrụ kredit na-ahụ maka ịnye ụzọ kachasị mma iji jikwaa ya site na ọrụ ntanetị ha maka ụlọ ọrụ. Maka Cmegharia ego ị zighachiri n’ụzọ dị mfe site na ngwanrọ, yana ibubata nnyefe gị ma ọ bụrụ na i nweelarị ha na usoro AEB.
I nwekwara ike rtrack laghachi; A na-ezitere gị ozi kwa ụbọchị. Ha na-enyekwa gị ndị ntụgharị na ndị na-echigharị ihe na usoro dị elu ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị anaghị arụ ọrụ na faịlụ akọwapụtara.
Egwu mkpuchi na arụmọrụ
Ahịa oscillations na-abụkarị ihe egwu maka ndị na-ata ahụhụ ha ma ọ bụrụ na ekpughere gị n'ihe egwu ahụ, ị ​​gaghị adị jụụ. Yabụ i nwere ike ịga n'ihu na nke gị agbanwe ego N'ụzọ dị oke egwu, anyị na-egosi na n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ akụ niile, e nwere ngwaahịa dị iche iche dị iche iche, dabere n'ụdị ndị ahịa, dịka oke ọnụego ọmụrụ nwa, nke na-echebe megide ọmụrụ nwa na-arị elu n'ụzọ abụọ.
Kachasị mmasị nhọrọ oke (okpu) maka eke na iwu mmadụ. Ọ na-egbochi imegide ịrị elu ọmụrụ nwa karịa ọnụego kachasị enyere na mbido maka oge akọwapụtara, n'ọnọdụ ego adịgboroja. Na oge ọ bụla, ọ bụrụ na ọnụego ọmụrụ nwa karịrị nke kachasị elu, ụlọ akụ na-akwụ gị ụgwọ maka ọdịiche ahụ.
EGO NA-EGO EGO (SWAP) maka ụfọdụ ụlọ ọrụ iwu kwadoro. Ọ bụ maka ịgbanwere ọnụego mgbanwe (dịka Euribor) maka ọnụego agbanwe agbanwe. Na oge ọ bụla, ọ bụrụ na ọnụego ahụ edozi karịa ọnụego mgbanwe, onye ahịa na-akwụ ụgwọ ahụ. Ma ọ bụghị ya, ọ bụ ụlọ akụ na-akwụ ya ụgwọ. N'ihe banyere nkwụsị aka n'oge, a ga-akagbu ngwaahịa a n'ahịa ma nwee ike ibute mmezi na-adịghị mma maka akụ ma ọ bụ maka onye ahịa ahụ.
Kedu ihe mkpuchi ndị a na-enye gị?
Na-ekpuchi onwe gị megide ihe egwu na ihu ihu ugwu na-adịghị mma
Nwere ike ibu ụzọ mara ụgwọ ego
Na-echebe onwe gị pụọ na mgbanwe ahịa
Usoro ego ICO
Mgbe ị na-emepe azụmaahịa gị n'ịntanetị, enwere ọtụtụ ihe ịkwesịrị iburu n'uche ka ọ rụọ ọrụ dịka ị tụrụ anya ya. Ya mere, na ihu a buru ibu ego, na Mbinye ego ICO. A ego nke ị nwere ike ịkwalite azụmahịa gị site na itinye ego na ọrụ ọhụụ na ndozi, n'ime na mpụga Spain.
Maka ndị nwe ụlọ na ụlọ ọrụ nha ọ bụla
Iji kwado ego itinye ego na mkpa ego
Mgbazinye ego na ịgbazinye ego
Na usoro mgbanwe ego
Ọnọdụ bara uru gbanwere ọrụ gị
Ruo 12,5 nde euro kwa onye ahịa na ihe ruru 100% nke oru ntinye
Nweta na usoro ntanetị
Ihe kachasị ha mma maka ụlọ ọrụ dị n'ịntanetị bụ eziokwu na enyere ha ọsọ ọsọ karịa kredit ọdịnala, na-enweghị mkpa iburu ụdị akwụkwọ ọ bụla, n'agbanyeghị na onyinye ha ga-adabere na mmachi enyere tupu nye onye ọ bụla na-azụ ahịa na, nke a na-ahụkarị n'ihi na ego a binyere ego dị ala karịa site na usoro kredit ndị ọzọ, n'agbanyeghị na ụfọdụ ụlọ ọrụ ego na-enye ya bulitere ego a na euro 60.000.
Ha na-etinyekarị ọmụrụ nwa dị iche n'etiti 7% na 10%, na oge ịkwụ ụgwọ nke na-adịkarịghị gafere afọ ise na, nke a ga-agbakwunye ụgwọ ọrụ ga-ekwe omume maka ọmụmụ ihe, mmezi amortization ma ọ bụ ịkagbu nke nwere ike ịnọchite anya 1% na 3% mgbakwunye na ihe a ga-akwụrịrị maka ngwaahịa nkwekọrịta ahụ. Agbanyeghị na ọ na-adịwanye mfe ịchọta ha n'etiti onyinye nke ụlọ ọrụ ego na-enye n'oge a, a gharịrị iburu n'uche na nkwekọrịta ha apụtaghị ụdị mbelata ọ bụla na ọnụego ọmụrụ nwa na-emetụta ụgwọ ndị edepụtara site na ọwa ndị ọzọ nwere ọdịnala.
Na nkenke, ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ dị n'ịntanetị nwere onyinye dị iche iche na-enye aka maka mkpa ha n'ezie. Site na ebe ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ịzụta akụrụngwa kọmputa, nweta teknụzụ ozi ọhụụ ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ naanị iji bulie ọrụ ndị ahịa, n'etiti ụfọdụ ihe ndị dị mkpa n'oge a. Site na usoro nke enwere ike ịme site na ụlọ akụ gị ma ọ bụ site na onyinye na nkwalite ndị ụlọ ọrụ ego a na-arụ. Nke mere na ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ dijitalụ nọ n'ọnọdụ ka mma ịsọmpi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere njirimara yiri ya. Ijigide ego n'ime akaụntụ nchekwa site ugbu a gawa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Klas ego maka e-azụmahịa
Kedu ihe bụ CES ma ọ bụ Commerce Electronic Secure?